Akụkọ - Mgbụsị akwụkwọ gbasara ahụike
Oge mgbụsị akwụkwọ gbasara ahụ ike
Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi dị mma. Ọ bụkwa oge dị elu maka ọrịa. Ọtụtụ Ọrịa na-adịkarị mfe ịmaliteghachi n'oge mgbụsị akwụkwọ. Dị ka ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ si kwuo, n'ihi mmetụta ahụnke ihu igwe na ihe ndi ozo, nsogbu nke obi ida mba na oria ndi ozo n'oge mgbụsị akwụkwọ amụbawo nke ukwuu. Ya mere, n'oge mgbụsị akwụkwọ kwesịrị ị attentiona ntị na ịhazi hammetụta uche, nwee nchekwube n'ihe niile, soro ndị enyi kwukọrịta, werekwuo na-ejegharị, ma ọ bụ na-ekere òkè na ọpụpụ ọpụpụ bụkwa ezigbo nhọrọ. Na n'oge mgbụsị akwụkwọ, ihu igweakọrọ ma ndi mmadu nwere ike ime ka obi ha daa.Ya mere n'oge mgbụsị akwụkwọ, anyị ga-azụlite ihe ọma àgwà nke ihi ụra n'oge na ibili n'isi ụtụtụ.
Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi nke ụdị mkpụrụ osisi niile. Ọ dị mfe iri ọtụtụ mkpụrụ iji mee ka ahụ erughị ala. Na mgbakwunye, mgbe abanyechara n'oge mgbụsị akwụkwọ, ahụỌrụ digestive malitere ịda mba Yabụ ọ bụrụ na ị kpachapụghị anya, ọ dị mfe ịnwe eriri afọ na-efe efe. Ya mere, n'oge mgbụsị akwụkwọ kwesịrị ntị ka mgbochi nkeeriri afọ na-arịa ọrịa, rie mkpụrụ osisi ka ị attentionaa ntị na ịdị ọcha, jụ nri oyi na ihe ọ drinksụ coldụ oyi, raw na mfri eke kwesịrị iche. Pfọdụ pasta, ofe osikapa na nri ndị ọzọ nwere ikeeji na-edozi afo.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, anyị kwesịrị ilebara anya iji kpoo ọkụ ma Na-ekere òkè n'ihe ụfọdụ a na-eme n'èzí enyere aka meziwanye ahụ ike ma gbochie oyi. agbanyeghị, ekwesịrị ịdeba na oge mgbụsị akwụkwọ mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ntakịrị, akwara na akwara nke ụmụ mmadụ reflexively na-akpata mmụba nke vasoconstriction na viscidity, na ọnụ nke dịgasị iche iche nke nkwonkwo nkwonkwo na mbelata nke ndọtị nke njikọta.Ọ bụrụ na anyị emeghị kpoo ahụ tupu mmega ahụ, ọ ga-ebute nkwonkwo nkwonkwo nkwonkwo, ahụ ike na ihe ndị ọzọ. Ndị ọkachamara na-atụ aro na oke mmega ahụ ekwesịghị ịdị oke. Ya mere, anyị kwesịrị ịhọrọ ụfọdụmfe ma dị nwayọọ eme.